धर्ममा आस्था राख्नेहरु निरोगी हुन्छन् ? -
२०७६ फाल्गुन १८, आईतवार १२:५७ गते मार्च 1, 2020 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on धर्ममा आस्था राख्नेहरु निरोगी हुन्छन् ?
धर्ममा आस्था राख्नेहरु नास्तिक भन्दा अपेक्षाकृत बढी स्वस्थ्य हुन्छन् ? धार्मिक आस्था राख्नेहरु धुमपान र मदिरा सेवन तुलनात्मक रुपमा कम सेवन गर्छन् ? एक सर्वेक्षण अनुसार धर्ममा आस्था राख्नेहरु कम्तीमा खानपानप्रति सजग र अनुशासित हुने देखिएको छ । त्यही कारण नास्तिकको तुलनामा उनीहरु बढी स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुने गरेका छन् ।
जीवनशैलीसँग सम्बन्धित यी बानीहरुका कारण उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य पनि अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ र आयु कम हुन्छ । करिव एक लाख मानिसमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणबाट यो कुरा प्रमाणित भएको हो ।
नास्तिकहरु बढी पियक्कड
बेलायतको अफिस फर नेशनल स्टाटिस्टिकद्वारा जारी गरिएको एउटा रिपोर्टका अनुसार आस्तिक मानिसहरुको तुलनामा धर्ममा आस्था नराख्ने मानिसहरुका धुम्रपान गर्ने बानी पनि दुई गुणा बढि हुने सम्भावना हुन्छ । यसमा भनिएको छ-‘धर्मलाई नमान्ने मानिस हरेक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले धुम्रपान गर्छ । त्यस्तै सिख, ईसाई अथवा इस्लाम धर्मलाई मान्ने हरेक १० मध्ये एक जना व्यक्तिले धुम्रपान गर्छ ।
उक्त रिपोर्टका अनुसार धर्ममा विश्वास नगर्ने मानिसहरुले मदिरा पिउने सम्भावना धेरै हुन्छ । आस्तिकहरुमा यस्तो लक्षण कम मात्र देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ पनि उत्कृष्ट
धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरु केवल शारीरिक स्वास्थको प्रसंगमा मात्र नास्तिकहरुभन्दा उत्कृष्ट हुँदैनन्, उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य पनि अपेक्षाकृत उत्कृष्ट हुन्छ ।
उक्त रिपोर्टमा के भनिएको छ भने ६८ प्रतिशत ईसाई, ७७ प्रतिशत यहूदी, ७२ प्रतिशत हिन्दू, ६९ प्रतिशत शिख तथा ६६ प्रतिशत इस्लाम धमावलम्बिहरुले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सन्तुष्टि जनाए । त्यहीँ, धर्ममा विश्वास नगर्नेहरु केवल ६४ प्रतिशत मानिसले मात्र आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाप्रति सन्तुष्ठि जनाए ।
सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म भएको सर्वेक्ष्ँण
यो रिपोर्ट इंग्ल्यान्ड र वेल्समा करिव एक लाख मानिसहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित छ । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म गरिएको सर्वेक्षणमा अफिस अफ नेशनल स्टेटाटिस्टिक्सले मानिससंग उनीहरुको जीवनमा धर्मको महत्वको ’boutमा सोधेेका थिए ।
रिपोर्टमा मानसिक स्वास्थ्यको स्तर थाहा पाउनका लागि भिन्दा-भिन्दै मापदण्डमा शुन्य देखि १०० सम्मको मार्किङ गरिएको थियो । जसमा ईसाई, हिन्दू, इस्लाम अथवा सिख धर्म मान्ने मानिसलाई मानसिक स्वास्थ्यका लागि ४९ प्रतिशत भन्दा बढि अंक प्राप्त भएको थियो भने कुनै पनि धर्म नमान्ने मानिसहरुलाई यसमा मुश्किलले ४८ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको थियो ।
जीवनशैलीसंग सम्बन्धित बानीहरु
यो भन्दा पहिला सन् २०१८ अमेरिकामा सार्वजनिक भएको एउटा रिपोर्टमा पनि नियमित चर्च जानेहरु, धर्ममा आस्था नराख्ने मानिसहरुको तुलनामा औसत चार पर्ष बढि बाँच्ने गर्छन् भनिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो -‘धर्मलाई मान्ने मानिसहरु सामाजिक गतिविधिहरुमा धेरै सहभागी हुन्छन् तर उमेर लामो हुने यही एउटा कारण भने होइन ।
यसको दोस्रो पाटो जीवनशैलीसंग सम्बन्धित बानीहरु पनि हुन्, जसमा आस्तिक विशेष रुपमा टाढा रहन्छन् । धुम्रपान र मदिरा जस्ता बानीबाट सावधान हुनेहरुको जीवन लामो हुन्छ ।
गर्मी सुरु भएसँगै कोराना भाइरस निस्कृय हुन्छ ?
२०७५ माघ ४, शुक्रबार १०:४८ गते जनवरी 18, 2019 पाल्पा खबर